Jereo ny tanàna tsara indrindra amin'ny morontsiraka Portiogey | Bezzia
Vohitra mahafinaritra amin'ny morontsirak'i Portiogaly
Susana Garcia | 19/05/2021 10:00 | Lifestyle, Tsangatsangana
Firenena manana hatsarana be i Portugal, miaraka amin'ny fomban-drazana tsy mampino ary kilometatra amoron-dranomasina maro izay mahatonga azy io ho iray amin'ny toerana tsara indrindra handaniany ny fahavaratra. Misy faritra amoron-tsiraka malaza kokoa, toy ny any Algarve, saingy mbola betsaka ny zavatra hita, toy ny morontsiraka avaratra sy ny tanànany izay mitovy amin'ny an'i Galicia na ny faritra afovoany, izay efa ahitantsika mpizahatany fanta-daza. toerana.
Ho hitantsika eo ny sasany amin'ireo tanàna manintona azontsika tsidihina raha mandeha amin'ny morontsirak'i Portiogaly isika. Ity morontsiraka ity dia be dia be ny mahita ary mitondra fiara miaraka aminy dia hevitra tsara. Izy io dia iray amin'ireo dia tsara indrindra azo tanterahina any Portugal.
Viana do Castelo dia iray amin'ireo toerana lehibe hitsidihana ny morontsiraka avaratra portiogey. Ity tanàna kely ity dia misy moron-dranomasina fa misy toerana maro azo jerena ihany koa. Eo ambonin'ny a Afaka mahita ny fiangonan'i Santa Luzia isika, tranobe miavaka miaraka amina drafitra toradroa izay manana fahitana mahavariana momba ny ranomasina sy ny tanàna. Rehefa tonga ao an-tanàna ianao dia afaka mankany amin'ny seranana hijery ny sambon'i Gil Eanes, sambo hopitaly taloha izay ahitanao ny fanaka nampiasain'izy ireo. Ao Viana do Castelo dia afaka mitsidika tranombakoka sôkôla koa isika.
Ity tanàna kely ity dia miorina ao amin'ny distrikan'i Porto ary toerana natokana ho an'ny jono. Ao an-tanàna isika dia afaka mahita ny iray amin'ireo trano mimanda avaratra mahazatra, fantatra toy ny fiarovana an'i Nossa Senhora de Conceiçao. Iray amin'ireo hevitra azo jerena ny Iglesia da Lapa, kely nefa tena manintona. Eo akaikin'ny trano mimanda no ahitantsika tsangambato ho an'ny vehivavy mpanjono. Androany ity tanàna ity dia manana fizahan-tany be dia be noho ny morontsiraka.
Aveiro ny isam-ponina dia fantatra amin'ny anarana hoe Venise Portigey amin'ny lakandrano, izay nampiasaina tamin'ny varotra taloha. Moliceiros dia sambo miloko marevaka ka mahafinaritra ny mpizahatany ankehitriny amin'ny alàlan'ny lakandrano. Manana tarehy tsara tarehy ny tanàna. Azontsika atao koa ny mahita ny Museum Museumiro ao amin'ny Convent of Jesus sy ny Catedral da Sé de Aveiro. Amin'ity faritra ity dia tsy tokony halahelo ny morontsirak'i Costa Nova sy ny torapasika Barra ianao.
Ity dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra any amin'ny morontsirak'i Portiogaly. Figueira da Foz dia manana moron-dranomasina mahafinaritra sy malalaka toy ny praia da Caridade. Eto amin'ity toerana ity isika dia afaka mahita trano mimanda sasany toa an'i Buarcos sy Santa Catarina ihany koa. Ao amin'ny faritra an-tanàn-dehibe dia ny lapan'ny Ben'ny tanàna Sotto, fomba frantsay ary zaridaina mahafinaritra. Ny casino dia iray amin'ireo teboka manandanja izay manintona mpizahatany maro.
Ity dia villa mahafinaritra iray hafa azo tsidihina. Ao amin'ny tsenan'ny tanàna dia afaka mahita ny karazan-tsakafo rehetra isika ary ny zaridaina Visconde da luz dia toerana iray an-tongotra eo afovoan-tanàna. ny promenade sy ny morontsiraka da Rainha na da Ribeira no teboka mahaliana indrindra. Tsy maintsy very ihany koa isika ao amin'ny tanànany taloha ary jereo, ohatra, ny Lapan'i Seixas na ilay trano mimanda taloha.
La Ny vahoaka Lagos dia any amin'ny faritr'i Algarve, any atsimon'i Portugal. Ity dia iray amin'ireo faritra mpizahatany indrindra any Portugal. Ny hantsana Ponta da Piedade dia tena tsara tarehy sy toerana voajanahary izay tsy maintsy jerena. Amin'ity faritra ity dia misy koa ny Meia Praia, iray amin'ireo morontsiraka lehibe indrindra ao aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Vohitra mahafinaritra amin'ny morontsirak'i Portiogaly
Mamitaka hahazoana hoditra mahasalama
Ahoana no hananana fahasalamana tsara amin'ny tongotra